Raysulwsaare Khayre ma ku tagrif awood ayuu Galmudug ka sameeyay: Arrinta Suldaan Luga Loox! - Ahmed Abdihadi
Xildhibaan Cabdirxamaan Dheere iyo Suldaanka Taariikh Dheer oo aan fiicnayn ayaa ka dhaxaysa.
Taariikhadan ayaa waxay tahay in Suldaanka iyo Cabdirxmaan Dheere saaxiib ku ahaayeen in midna arrimaha siyaasadda u fududeeyo, midna arrimaha dhaqaalaha iyo wixii dhaqanka siyaasadda ka soo galo fududeeyo.
Arrinta layaabka leh ayaa waxay tahay Suldaan Luga loox Cabdirxmaan uma ah Suldaan ee ninkii Suldaanka u noqon lahaa Cabdirxmaan Dheere ayaa u diiday in uu soo galo saxiixyaasha Odyaasha dhaqanka oo hadda halka ay 135 ka yihiin 136 ka noqon lahaa: Sheekhaal laba oday dhaqan ayay lahayd laakiin hadda midkan unbaa ku jiray Odayaasha dhaqanka.
Dadka aan Sheekhaal si fiican u kala aqoonin haddii aan idiin sii caddeeyo Luga loox Reer Loobage ayuu Suldaan u yahay ee Reer Awqudhub uma ah laakiin Cabdirxmaan Dheere oo ka cararayay in uu Suldaanka Reer Awqudhub soo galo odyaasha ayaa labadiiba shaqaba Luga Loox iskugu daray, kuna magacaabay Suldaanka Guud ee Sheekhaaleed oo ahayd arrin siyaasadeed.
Haddaba, arrinta waxay ka xumaatay waxaa isku dhacay Luga Loox iyo Cabdirxmaan Dheere.
Cabdirxmaan Dheere caadi ahaan ma ah nin mowqif siyaasadeed leh ee marba ninka xilka haya ayuu u dhowyahay oo waxa uu ka rabo u qabtaa. Sidaas darteed, Madaxduna markasta waa u dhaga nugulyihiin. Maxaa yeelay, markata qofka baariga kuu ah dareen gaar ah ayuu kugu leeyahay sida cilmiga nafsiga (pyschologa) ku jirta.
Haddaba, Khaire maxaa ka khaldmay?!
Khaire waxaa ka khaldamay in uu fahmi waayo talada Cabdirxamaan Dheere siiyay in khalad tahay laba sababood owgood:
Lugaloox Cabdirxmaan Dheere Oday u ma ah ee Maryama iyo Cali Yare ayuu u yahay. Sidaas darteed, arrin Suldaan Luga Loox ku saabasan ma ahayn in Cabdirxmaan Dheere ka talo siiyo.
Arrinta Galmudug waa arrin Reer Loobge buddhiga u yihiin, marka waxay ahayd in uu xildhibaanadooda kala tashadu. Haddi Mucaaradnimada iyo xurgufta idinka dhaxaysa labada Xildhibaan owgeed aad ula tashanwaysay, uga yaraan waxay ahayd in Suldaanka ixtiraamatu maadama uu Koofiyad dhaqan xiranyahay.
Raysulwasaare Khaire waddaddii Jabka miyuu lugta saaray?!
Raysulwasaraha hadda in aan lafaguro ma rabo, laakiin si fiican ayaan u aqaanaa haddii aan rabo si fiican ayaan u qaadaa dhigi kara. Laakiin hadda waxaan halkan ku soo gaabsan:
Raysul wasaarahu wuxuu sameeyay awood ku tagrifal ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo (Power abuse) maxaa yeelay, oday dhaqameed in uu jagadiisa ka ka qaado sharci ahaan iyo damiir ahaan midna xaq uma leh.
Beesha Sheekhaal (Gaar ahaan Reer Loobge) wuxuu ka galay khalad sharci iyo mid dhaqan labada. Sharafta qabiilka ayuu meel kaga dhacay.
Waxaa muuqata in Galmudug waddaddii Baydhabo cagta saartay, haddana la sii ogaan karo cidda madax noqon karta.